ခြံဝင်းတံခါးကိုဖြတ်ပြီး Click ဆိုင်ကယ် ၂ စီးကိုခိုးယူသွားတဲ့ မန္တလေးမြို့က ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာ CCTV ကင်မရာမှ ရိုက်ကူးရရှိ - ခြံဝင်းတံခါးကိုဖြတ်ပြီး Click ဆိုင်ကယ် ၂ စီးကိုခိုးယူသွားတဲ့ မန္တလေးမြို့က ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာ CCTV ကင်မရာမှ ရိုက်ကူးရရှိ
ခြံဝင်းတံခါးကိုဖြတ်ပြီး Click ဆိုင်ကယ် ၂ စီးကိုခိုးယူသွားတဲ့ မန္တလေးမြို့က ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာ CCTV ကင်မရာမှ ရိုက်ကူးရရှိ
၂၅ ရက်နေ့မနက် ၂ နာရီလောက်က ဝင်းတံခါးကိုဖျက်ပြီး Click ဆိုင်ကယ် ၂ စီးကိုခိုးသွားပါတယ်
Solex သော့ကိုဖွင့်တာကျွမ်းကျင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့အိမ်ဆို ချောင်ကျတဲ့နေရာတော့မဟုတ်ပါဘူး မြို့တော်ခန်းမနဲ့ ကပ်ရက်လေ ပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲ မျက်နှာချင်းဆိုင်က မြို့တော်ခန်းမရုံးရဲ့မီးရောင်အောက်မှာ သော့ကိုအေးအေးဆေးဆေးသွားဖျက်နေကြတာပါ
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်မမွေးခင်ကထဲကနေလာတာလို့ပြောလို့ရတယ် ဒီအသက်အရွယ်အထိ တစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး ဘယ်သူ့ကိုမှအပြစ်မတင်လိုတော့ပါဘူး
မန္တလေးမြို့ကလူတွေ သတိထားကြပါ ကိုယ့် အိမ်လုံခြုံရေး ကိုယ့်ဟာကိုဂရုစိုက်ကြပါ
၁. ကိုက်တတ်တဲ့ ခွေးမွေးထားပါ
၂. CCTV ကိုအမျိုးအစားကောင်းတာတပ်ထားပါ ၃. မိသားစုဝင်တိုင်း တစ်ယောက်တစ်လှည့် ညမအိပ်ဘဲအလှည့်ကျကင်းစောင့်အိပ်ကြပါ
၄. အိမ်ထဲမှာ တုတ်/ ဓားလက်နက်ဆောင်ထားခွင့်မရှိပါ ၅. အိမ်အနီးနားဝန်းကျင်မှာမသင်္ကာစရာတစ်ခုခုတွေ့ပါက ရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားပါ ( လာတာ မလာတာသူတို့အပိုင်းပေါ့လေ) ������
၆. အိမ်မှာရှိတဲ့ယောင်္ကျားလေးတိုင်းအရွယ်ရောက်တာနဲ့သိုင်း / ကရာတေး ကိုယ်ခံပညာတစ်ခုခုကို ခါးပါတ်နက်အဆင့်လောက်အထိအနဲဆုံးရောက်အောင်သင်ထားကြပါ ၇. အကယ်၍မိခဲ့ရင် ဘာမှမလုပ်ဘဲ ရဲစခန်းကိုအမြန်ဆုံးအကြောင်းကြားပါ (အဲ့ဒီအချိန်ပါလာတဲ့လက်နက်နဲ့ထိုးသွားလဲအသေခံလိုက်ကြပါ) #ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးမလုံခြုံတော့ပါ ဟိုနေ့က friend only မို့ share လို့မရတဲ့လူတွေ share နိုင်ပါတယ် သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာ ဟူ၍ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်သို့ Thet Khaine Soe အကောင့်ပိုင်ရှင်မှ တင်ထားပါသည်။